LINE: Free Calls & Messages 8.19.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.19.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး LINE: Free Calls & Messages
LINE: Free Calls & Messages ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
LINE, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဆက်သွယ်ရေး reshapes သငျသညျကိုသာစာတိုပေးပို့ရေးခံစားရန်ခွင့်ပြုပေမယ့်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့လေရာရာ၌အခမဲ့အသံနှင့်ဗီဒီယိုကတောင်းဆိုထားသည်။
ဒေါင်းလုပ် LINE နှင့် 52 နိုင်ငံများ၌၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူကြိုက်များနှင့်နံပါတ်တစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်တွေ့ရှ။
★ Intimate ပြောဆိုမှုများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောပတ်ပတ်လည်စားပွဲအုပ်စုတစ်စုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖွစျနိုငျ
တစ်ပြိုင်နက်တည်းသင့်ရဲ့အုပ်စုအထိ 200 သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat! အဖြစ်ကောင်းစွာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကဗီဒီယိုချတ်ရင်ဆိုင်ဖို့မျက်နှာပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်တို့နေရာမရှိတာဝန်ခံမှာအကြီးအရညျအသှေးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခံစားပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာတက်မှလူ 200 ခန့်နှင့်အတူတောင်မှနိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုလုံးဝအခမဲ့များမှာ! ပို. ပင်ပျော်စရာဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုစဉ်အတွင်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် filter သုံးပါ။ (ဒီအင်္ဂါရပ်အချို့ကိရိယာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်မကျမည်အကြောင်းသတိပြုပါ။ )
ဝေမျှမယ်မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, စတစ်ကာများ, အသံမက်ဆေ့ခ်ျများ, နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအလွယ်တကူနေရာများတွင်။
★ပျော်စရာလွယ်ကူ-to-အသုံးပြုမှုလူမှုကွန်ရက် features တွေ
မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဓာတ်ပုံများကနေဗီဒီယိုများနှင့်တည်နေရာ, Timeline ကိုတွင်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင့်ရဲ့နေ့စဉ်အချိန်လေးကိုမျှဝေ!
လူကြိုက်များအခမဲ့စတစ်ကာများပေါင်းကမ္ဘာ့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များ၏ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောစတစ်ကာများရာပေါင်းများစွာရှာဖွေပါ! သင့်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့လမ်းအတွက်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုတက်အသက်ဝင်စေဖို့ LINE စတစ်ကာအစုံအမျိုးမျိုးကနေရွေးချယ်ပါ။
★ Auto-ထပ်တူပြုခြင်းသင့်ရဲ့ device နဲ့ PC
အဆိုပါမိုဘိုင်းဗားရှင်းနှင့်အတူလိုက်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ PC သို့မဟုတ် Mac သုံးပြီး desktop ကိုဗားရှင်းချိတ်ဆက်အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့် LINE ချတ်အမြဲ Up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဗားရှင်းကိုဖြတ်ပြီးအလိုအလြောကျတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်။
သင်အလွယ်တကူမိတ်ဆွေများကသူတို့နှင့်အတူဝေမျှနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ Keep ထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်ပိုပြီးသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
★ LINE အရာရှိတဦးကအကောင့်နှင့်အတူသတင်းပေးပါ
သူတို့ရဲ့အရာရှိတဦးကအကောင့် friending ဖြင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးနာမည်ကြီးတွေနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။
★ App အသစ်များချိတ်ဆက်ထားပြီး Get
LINE ဧည့်ခံသငျသညျစောငျ့ရှောကျနှင့်သင့်အသက်တာကိုအသစ်အဆင်ပြေဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကြောင်းဖျော်ဖြေရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ app တွေတစ်ခုတံခါးပေါက်ပေးပါသည်။
★ LINE ထဲကအတူနိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု Make
အနိမ့်မှုနှုန်းမှာမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုချထားပါ။ သင်ပင် LINE ပေါ်မဟုတ်သောမိတ်ဆွေများကိုမခေါ်နိုင်ပါ။
Plus အား, LINE ထဲကအခမဲ့နှင့်အတူကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ပြီးနောက်အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုပျော်မွေ့။
■ကျနော်တို့ကဒေတာအစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ရင်ဒေတာအသုံးပြုမှုစရိတ်ကျခံရလိမ့်မည်အဖြစ်ကို Wi-Fi ချိတ်ဆက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
■ကိုလည်းလေးရယ်အတိုင်းအတာအထိ LINE ကိုခံစားဖို့က Android OS ဗားရှင်း 4.4 နှင့်အထက်နှင့်အတူ LINE ကိုအသုံးပြုဖို့ပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုမြန်နှုန်းအရမ်းနှေးသို့မဟုတ်သင်အလုံအလောက် device ကိုသိုလှောင်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, LINE စနစ်တကျ install မည်မဟုတ်ပါလျှင်။
LINE: Free Calls & Messages အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
LINE: Free Calls & Messages အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
LINE: Free Calls & Messages အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
tjinhasan စတိုး 3.57k 778.59k
LINE: Free Calls & Messages ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း LINE: Free Calls & Messages အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.19.2
ထုတ်လုပ်သူ LINE Corporation
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://terms.line.me/line_rules/
File Size: 96.54MB
Release date: 2018-12-17 10:20:41
လက်မှတ် SHA1: 89:39:6D:C4:19:29:24:73:97:28:13:92:28:67:E6:97:3D:6F:5C:50
ထုတ်လုပ်သူ (CN): tsutomu horiyashiki
အဖွဲ့အစည်း (O): NaverJapan
နယ်မြေ (L): Oosaki Sinagawa-ku
LINE: Free Calls & Messages APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ